उपचार खर्चको अभावमा हिलेटक्सारका मनवबहादुर गुरुङको साहारा ह्यीलचेयर वनेको छ । दोर्दी गाँउपालिका वडा नंं. ४ का ३४ वर्षिय मनवहादुर मेरुदण्डको समस्याबाट पिडित छन् । उपचारका लागि धरै रकम चाहिने भएपछि अहिले उनि सहयोगी हातको पर्खाइमा बसीरहेका छन् । गाँउघरमा सामान्य विजुलीको काम गरी जिविकोपार्जन गर्दै आएका गुरुङको विद्युत् लाइन जोड्ने क्रममा पोलबाट खसेर ढाँड भाँचिएको थियो । ३ वर्ष अघि साउन महिनामा भएको उक्त दुर्घटनाले उनको जिवन अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ । उनको उपचारका लागि हाल सम्म मात्र १७ लाख भन्दा वढि खर्च भैसकेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । अहिले उनको कम्मर मुनीको भाग नचल्ने भएको छ ।
नियमित उपचार गरेमा उनको स्वास्थ्यमा सुधार आउने र हिडडुल पनि गर्न सक्ने साहारा क्यर अस्पताल महाराजगंजका डा. हरी लम्सालले बताउनुभएको छ । विएनवि अस्पतालमा ७ महिनाको उपचार पछि गुरुडलाई थप उपचारका लागि साहारा क्यरमा रिफर गरिएको हो । थप उपचारका लागि आर्थिक अभाव भएपछि उनि ३ बर्षदेखी घरमै बसिरहेका छन् ।
चिनेजानेका व्यक्तिको सहयोग र आफूसँग भएको केहि रकम पनि सकिएपछि गुरुङ र उनका परिवारले आर्थिक सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । घरको अर्थिक अवस्था पनि कमजोर र आयआर्जनको कुनै स्रोत नभएपछि मनवहादुरले स्वास्थ्य उपचारका लागि देश विदेशमा रहेका व्यक्ति तथा समाजिक संघसस्थासगँ सहयोगको याचना गरेका छन् । मनवहादुरको श्रीमती २ छोरा र १ छोरी छन् । बेसीशहरस्थित फुपु भिमकुमारीसगँ वस्दै आएका उनका छोराहरुलाई भने विद्याविकास माध्यमिक विद्यालयले निशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरिदिएको छ ।